/Blog/garari/Nootropic Coluracetam: Maitiro Ekushanda paBongo uye Bata Kunetseka
Posted on 03 / 17 / 2021 by 阿斯劳 akanyora garari.
Racetam Mhuri yeNootropic- Coluracetam
Coluracetam (BCI-540, kana MKC-231) is a fat-soluble nootropic in the racetam-class of compounds. Coluracetam yakanyanya kusimba kupfuura iyo yekutanga racetam, Piracetam. Coluracetam yakapihwa patent neMitsubishi Tanabe Pharma yekuJapan muna 2005. Kuiita imwe yetsva dzeracetam-based nootropics.
Iyo patent yeColuracetam yakazotengeswa kuBrainCells, Inc. muSan Diego, California. BrainCells idiki, yakachengetwa-yakachengetwa biopharmaceutical kambani inoshanda mukugadzira makomputa ekurapa kwechirwere chedepression, MD, chirwere cheAlzheimer.
Coluracetam yakafanana muchimiro nePiracetam. Uye senge ese racetam nootropics, ine pyrrolidone nucleus pachikamu chayo. Iyo yazvino kiriniki yekutsvagisa inoratidza kugona kwekurapa kushungurudzika kusagadzikana, uye retinal uye optic nerve kukuvara.
Coluracetam yakasimba kwazvo choline inotarisa supplement. Inosimudzira yako uropi 's choline kutendeuka kuita acetylcholine (ACh) kuburikidza nehukama hwehukama choline inotora (HACU) maitiro. Izvo zvinowedzera kusvinura, kutarisa kune zvakadzama uye ndangariro.
Kumwe kutsvagurudza, uye ruzivo rwewega zvinoratidza Coluracetam inogona kukanganisa AMPA receptors. Kuigadzira inogona ampapine nootropic. Izvo zvinogona kutsanangura zvinokurudzira-senge mhedzisiro pasina mhedzisiro yemagariro zvinokurudzira. Coluracetam inoratidzawo zvimwe zvinokanganisa (anti-kufunganya) hunhu hunobatsira kugadzirisa manzwiro uye kunyaradza kushushikana.
sei Coluracetam Works(Nzira yeMabasa)
Kufanana nemakomputa mazhinji e racetam, coluracetam (CAS:135463-81-9) inoshanda zvakanyanya nekuwedzera mazinga eiyo neurotransmitter acetylcholine, inoenderana zvakanyanya nekudzidza, ndangariro, uye kugona.
Zvisinei, nzira iyo coluracetam inogadzirisa mazinga eacetylcholine yakasiyana. Kazhinji, racetams inokonzeresa acetylcholine kugadzirwa nekumutsira iwo akakodzera ma receptors, asi coluracetam inoita kudaro nekusimudzira yakakwira-hukama hukama choline inotora, kana HACU. Iyo HACU system inosarudza chiyero icho choline inodhonzwa kuita mauroni ekushandura kuita acetylcholine.
Nekuwedzera chiyero icho choline inodhonzwa mumasero etsinga, coluracetam inosimudzira kugadzirwa kweacetylcholine uye inokonzeresa huwandu hwehuropi hweiyi yakakosha neurotransmitter kusimuka. kune iko kukurumidza kuwanikwa kwecholine yekutorwa.
Pamwe chete zviito izvi zvinotungamira kumatunhu akakwira eacetylcholine, ayo anosanganisirwa nekusimudzirwa kwekuziva uye ndangariro.
Benefits uye migumisiro Of Coluracetam
❶ Coluracetam Inovandudza Ndangariro uye Kudzidza
Coluracetam mabhenefiti anoratidza kushanda mukumanikidza kwekuziva uye ndangariro basa mumakonzo uye zvakafanana mhedzisiro pavanhu. Brain Cells Inc. yakaita ongororo inoratidza kuvandudzwa kwepfungwa mumakonzo mushure mekugamuchira AF64A kwemazuva masere. Iyo budiriro yakaramba ichingopera kunyangwe nekurapwa. Chirwere cheAlzheimer inotungamira kumatunhu ezasi eacetylcholine. Nekukura acetylcholine mune hippocampus, coluracetam ichawedzera zviratidzo zvechirwere cheAlzheimer senge kusagadzikana kwekudzidza uye kusarangarira zvakanaka.
❷ Coluracetam Inoderedza Kurapa-Kurwisa Kushungurudzika
Mune ongororo yevanhu zana negumi vane kushushikana, vasina kuwana kurapwa nemishonga yekudzvinyirira, yakave nemhedzisiro inovandudza pakuonekwa kwehupenyu pa101 mg katatu pazuva. Zvisinei, iyi ndiyo chete chidzidzo pamusoro pevanhu. Iko kugona kwainobata kudzikisira glutamate kutya kunogona kuve nemhosva yezvainoita zvakanaka pakurapa kwekuora mwoyo.
❸ Coluracetam Inoderedza Kushushikana
Muchidzidzo chegonzo, kutora mazuva makumi maviri nemana ecoluracetam inoratidza kuvandudzwa kwe21% mukushushikana, iyo yaive yakakwira kupfuura iyo 20% mhedzisiro yevhosiamu kukanganisa mune imwe dosi muchidzidzo chimwe chete.
❹ Coluracetam Inokurudzira Neurogeneis
Zvimwe zvidzidzo zvinotaura kuti zvinobatsira neurogeneis. Iyo yekutanga mashandiro haisati yajeka, asi inoenderana nekutungamirwa kwayo kwemavhiki akati wandei, ayo anowedzera muacetylcholine munzvimbo yehippocampus. Iyo michina haina kuzivikanwa, zvakadaro inofungidzirwa kuve inoenderana nekuwedzera kwehippocampal acetylcholine apo coluracetam inodhonzwa zuva nezuva kwemavhiki mashoma. ''
❺ Coluracetam Inobatsira neSchizophrenia
Coluracetam inowedzera chiitiko cheCHAT mumakonzo ane nerve sero kukuvara. Uku kuwedzera kunoratidza kuti kunogona kubatsira varwere vane schizophrenia kuburikidza neiyi enzyme. Kumwe kutsvagurudza zvakananga kune vanhu vane schizophrenia kuri kuitika.
❻ Coluracetam Kunowedzera Kuona
Coluracetam yakaratidza simba rayo re optic senge kuvandudzwa kwemavara, kuona, uye kujeka. Kunyanya, inokurudzira kukura kwetsinga kwechirwere chinodzora chetsana. Dzakawanda ongororo dzinotaura zvirinani kuona kwemavara uye kurodza kweziso, asi hapana ongororo yesainzi yakatsigira izvi mhedzisiro.
MUTSVENE ndiye nyanzvi yekugadzira Coluracetam.
Coluracetam inoshanda sei muBongo?
Coluracetam inosimudzira hutano hwehuropi uye mashandiro munzira dzinoverengeka. Asi vaviri kunyanya kumira.
Coluracetam inowedzera uropi hwako's choline inotorwa nekutarisa uye kushanda pamwe nehukama hwehukama hwecholine (HACU) maitiro muuropi dzeuropi.
Acetylcholine (ACh) inoumbwa ne choline uye acetate. Izvi zvinofanirwa kuwanikwa kune iyo neuron terminal nguva dzese. Saka kuti ACh inogona kugadzirwa pese painenge ichidiwa.
Yemahara choline inotenderera muropa inodarika iyo yeropa-uropi chipingaidzo. Uye inotorwa ne cholinergic neuron terminals. Inotorwa mukati meiyo neuron neiyo yakanyanya kubatana choline inotora (HACU) system. Iko synthesis yeAC inoitika mune iyo synaptic cleft. Iyo nzvimbo pakati peeuron painofamba mueuron.
Iyo HACU system itembiricha-, simba-, uye sodium-inoenderana. Iyi sisitimu ndiyo nzira yekutanga iyo choline inodiwa pakuumbwa kweACh inoendeswa kune iyo neuron. Uye ndiyo danho-rinotapudza danho mukugadzirwa kweiyi yakakosha neurotransmitter Kana ino sisitimu ichidonha kana isingashande nemazvo sekugadzirwa kwayakaitwa, unowana matambudziko nekurangarira, kudzidza, uye hutsi hwehuropi.
Coluracetam inogadzirisa iyi maitiro uye inoibatsira kuti ishande zvakanyanya. Muchokwadi, zvinoita sekusimudzira maitiro eHACU. Kunyangwe mune dzakakanganiswa mauroni. Yakawedzera acetylcholine mueuron inobatsira kuvandudza ndangariro, inowedzera kugona uye inopa zvirinani kutora danho kugona.
Coluracetam zvakare inoita kunge inovandudza AMPA potentiation. AMPA receptors anokanganiswa ne glutamate. Izvo zvinoshanda muhuropi nepakati sisitimu sisitimu yekuvandudza kusvinura uye kugona.
Coluracetam inoshanda pamwe neese AMPA potentiation uye choline inotora kusimudzira. Iko kusanganisa kunoratidzika kunge kunobatsira kugadzirisa kusagadzikana kwepfungwa pasina kukanganisa maserotonin mazinga.
Serotonin Selective Reuptake Inhibitors (SSRIs) ndiyo yazvino nzira inosarudzika yekurapa yekubata nekushushikana kwepfungwa uye kushushikana. Vanouya nerondedzero yemhedzisiro inokuvadza. Uye usashande kune wese murwere akaora mwoyo.
Vanotsvagurudza vakataura kuti Coluracetam yaive inobatsira pakurapa kwakakura kiriniki kushushikana uye kusagadzikana kusagadzikana. Pasina kukanganisa serotonin mazinga muuropi. Uye pasina iyo mhedzisiro iyo inoenda nekukanganisa serotonin.
Coluracetam Usage: Chipimo chemushonga Uye Stack YeReferensi chete
Coluracetam ikomboni isingawanikwe mune chero chikafu uye miviri yedu haigone kuiburitsa. Nekudaro, iyo chete nzira yekupa zvakanakira mamorekuru aya ndeyokuwedzera.
Coluracetam inowanzo kutengeswa muhupfu kana fomu fomu uye inogona kutorwa nemuromo. MaDosi anogona zvakare kutorwa sublingually (pasi perurimi) yekumhanyisa uye nekukurumidza kunwisa.
Sezvo coluracetam iri inomiririra ine simba, zvinokurudzirwa kutanga neyakaderera dhizaini. Kana iwe ukaona iwe uchida kuwedzera iyo dosi kuti unzwe mabhenefiti, izvi zvinofanirwa kuitwa zvishoma nezvishoma uye hazvifanirwe kupfuura 80mg.
Coluracetam haina chepfu uye inoonekwa seyakachengeteka uye inoremekedzwa. Pane mashoma mashoma mhedzisiro mhedzisiro inosanganiswa nekomboni, senge kushushikana, kurwadziwa nemusoro, kuneta uye kuda kurutsa. Iyi mhedzisiro mhedzisiro isingawanzo uye inowanzoitika kana pasina rakakura rakatangira dziva re choline rinoshandiswa kune acetylcholine synthesis Ichi ndicho chikonzero isu tichikurudzira kutanga synthesis-kuwedzera coluracetam ine choline level inosimudzira senge citicoline.
Coluracetam inogona kusangana nemimwe mishonga, kunyanya iya inobatana neyeNMDA receptor. Izvi zvinosanganisira kukosora zvinodzvinyirira uye anesthetics. Zvimwe zvinhu zvinobatana neiyo cholinergic system, senge glaucoma mishonga uye nicotine, inogona zvakare kusangana nemhedzisiro yecoluracetam. Coluracetam inogona kurwisa mhedzisiro yemishonga inorwisa-cholinergic (senge mamwe maBenadryl, mamwe maantipsychotic nemishonga yaPasinson).
Sezvo nechero chekuwedzera, kana iwe uri pamushonga kana uine hutano hwakanangana nehutano, zvine musoro kuti utaure nachiremba wako usati watanga chero kuwedzera hurumende.
※ How To Stacks Wiye With Zvimwe Zvinodhaka
Ur Coluracetam is a fat-soluble molecule, saka zvakanakisa zvakazara nemafuta ane hutano senge coconut kana MCT mafuta.
Ur Coluracetam inofanirawo kuiswa pamwe ne choline supplement senge citicoline. Citicoline inowedzera dziva reiyo inowanikwa choline yekubatanidza. Iyo stack inogona kuumba mhedzisiro ine simba nekuwedzera iripo choline (citicoline) uye kugona kuisanganisa muacetylcholine (coluracetam).
※ Yakakurudzirwa Dose: 5-80mg pazuva
Tinokurudzira pakati pe5-80mg yecoluracetam pazuva.
Iyo yakachengeteka yepamusoro muganho wecoluracetam ndeye 80mg pazuva. Nekudaro, isu tinokurudzira kugara ne35mg pazuva sezvo mhedzisiro yemadhora epamusoro isati yaongororwa zvizere muvanhu.
Izvo zvakakwana kupatsanura aya madosi kuita mangwanani kana masikati dhizaini. Semuenzaniso, iyo 20mg dhizaini ye10mg mangwanani uyezve imwe 10mg masikati.
Sezvambotaurwa, iwe unofanirwa kutanga kumagumo ezasi eiyo dosing sikero. Kutanga kweiyo yakaderera inoshanda dosi inoderedza mukana wechiitiko chero wakashata mhedzisiro.
Coluracetam Side Migumisiro
Coluracetam haina chepfu. Saka inoonekwa seyakaregererwa-uye yakachengeteka. Vazhinji vekutanga-nguva vashandisi veColuracetam vanotaura kuneta uko kunowanzo kuve mhedzisiro yekutanga neakanyanya muyero.
Rangarira, Coluracetam inoshanda nekusimudzira choline inotora muuropi hwako. Choline ndiyo inotungamira mukugadzirwa kweacetylcholine. Kana isina kukwana choline inowanikwa mune yako system, iwe unonzwa iyo mhedzisiro.
Kutemwa nemusoro kubva pakushandisa Coluracetam zvinowanzoitika kana ukakanganwa kuzvibatanidza neakanaka choline yekuwedzera. Kutemwa nemusoro kazhinji chiratidzo chekushomeka kwechikori muuropi hwako.
Coluracetam imwe yenhengo nyowani uye dzisinganyanyo zikanwa dzekirasi ye racetam ye nootropics, asi inofarirwa nevashandisi vazhinji.
Inowedzera huwandu hweiyo '' yekudzidza neurotransmitter '' acetylcholine, iyo inogona kusimudzira kugona, uye zvidzidzo zvemhuka zvinoratidza kuti inogona kugadzirisa kusakwana kwekurangarira pasina akakosha mhedzisiro. Kunyangwe paine zvishoma-zvakanyorwa pakutsvagirwa kwevanhu pane coluracetam, izvo zvidzidzo zviripo zvinoratidza kuti inogona kuve yakakosha kurapwa kwekuzvidya mwoyo uye kushushikana.
Vazhinji vashandisi vanozvivimba seyakavimbika mamhepo anosimudza uye ndangariro inosimudzira iyo inovapa zviri nani kutarisisa uye kusimbisa. Vamwe vanoti inovapa iyo yakaenzana ne "HD kuona", ichiita kuti mavara apenye, kusiyanisa zvakanyanya, uye mwenje kupenyerera.
Coluracetam chinhu chine simba, saka zviyero zvemadhora zvakaderera, uye inozivikanwa kuti inokurumidza-kuita. Inotengeswa sekudya kuwedzera muUS uye inogona kuunzwa zviri pamutemo kuCanada uye UK mune zvidiki.
Pachine zvakawanda zvekudzidza nezve coluracetam, asi zvinoita kunge yakachengeteka kune vazhinji vashandisi kana ikatorwa zvine mutsigo. Kana iwe uchifarira kuwedzera chimwe chinhu chitsva uye chakasiyana neako nootropic stack, coluracetam inogona kuve yekufunga.
Coluracetam haina huwandu hwakawanda hwekutsvaga, izvo zvidzidzo zviripo zvinoratidza mukana mukuru wekushandisa kwayo. Iyo ndeimwe yazvino-kuenda-hukuru maracetams, padivi nepadivi ne Fasoracetam. Zvisinei, munguva pfupi yapfuura, FDA yakabvumira fomu "yakawedzerwa" yeFasoracetam yekurapa ADHD.
 Brauser D. "Neurogenesis-Inokurudzira Makemikari Ratidza Chipikirwa Mukurapa Kwekushungurudzika Kukuru" Medscape Medical News Nyamavhuvhu 21, 2009
 Murai S., Saito H., Abe E., Masuda Y., Odashima J., Itoh T. Zvinyorwa zveNeural Transmission General Chikamu. 231; 1994 (98): 1-1.
 Takashina K., Bessho T., Mori R., Eguchi J., Saito K. Zvinyorwa zveNeural Transmission (Vienna). 231 Jul; 2 (64): 2008-115.
 Bessho T., Takashina K., Eguchi J., Komatsu T., Saito K. Zvinyorwa zveNeural Transmission (Vienna). 231 Jul; 1 (64): 2008-115.
 Akaike A., Maeda T., Kaneko S., Tamura Y. ChiJapan Chiitiko cheFarmacology. 231 Kukadzi; 1998 (76): 2-219
 Shirayama Y, Yamamoto A, Nishimura T, Katayama S, Kawahara R (Gunyana 2007). "Kuenderera mberi kwekuratidzira kune choline inotora inosimudzira MKC-231 inopesana ne phencyclidine-inokonzeresa kushomeka kwehunhu uye kuderedzwa kwe septal cholinergic neurons mumakonzo". European Neuropsychopharmacology. 17 (9): 616-26.
 Inokodzera Therapiki Discovery Project Zvipo zveNyika yeCalifornia, IRS.gov.
 Malykh, AG, & Sadaie, MR (2010). Piracetam uye Piracetam-Senge Zvinodhaka. Zvinodhaka, 70 (3), 287-312.
Nzira yekuita testosterone enanthate homebrew mu 6 matanho
Top 15 Winstrol Zvipo Unoda Kuziva Usati Watenga Winstrol Online
Curcumin Yakagadzirwa J-147 Bata AD, Anti-kukwegura, Kushungurudzika Dambudziko (MDD)	Zvinotarisirwa Zvinodhaka Ibrutinib: Chii Chaunoziva Iwe